XOG + SAWIRRO: Sidee ku suurta-gashay in Cabdikariin Guuleed iyo Shariif Xasan ay diyaarad ku tagaan Kismaayo?! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG + SAWIRRO: Sidee ku suurta-gashay in Cabdikariin Guuleed iyo Shariif Xasan...
Kismaayo (Halqaran.com) – Madaxweynihii hore ee Maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed, oo maanta tagey Magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose ayaa ka hadlay ujeedada uu wafdigii uu la socday u tagey magaaladaasi.
Madaxweynihii hore ee Galmudug ayaa sheegay in wafdigiisa uu Magaalada Kismaayo u tagey ka qaybgalka caleemo saarka Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe).
Wafdigan oo noqonayo kiisii ugu horeeyay ee Kismaayo u tagga caleemo saarka Madaxweynaha Jubbaland ayaa waxaa horkacayay C/kariin Xuseen Guuleed iyo Madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed, Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Diyaaraddii ay wafdigan la socdeen oo ka amba baxday Magaalada Nairobi ayaa si toos ah u tagtey Magaalada Kismaayo, xilli aanay soo marin Magaalada Muqdisho, waxayna noqoneysaa tii ugu horeysay oo amarka dowladda jebiso.
Dowladda Federaalka Somaliya ayaa horey awaamiir ugu soo rogtay diyaaradaha tagga Magaalada Kismaayo, iyadoona amartay in marka ay taggayan iyo kolka ay ka soo baxayanba soo maraan Magaalada Muqdisho.
Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ka hadlayay jebinta amarka dowladda ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay jebintaasi, isagoo taasi ku sababeeyay in dadka reer Jubbaland aanay qaban in dowladdu cunaqabateyso.
“Reer Jubbaland ma qabato cunaqabateyn, mana ka qabato dowladooda, waana ku faraxsanahay in cunaqabteyntii la jebiyay.” Ayuu yir Madaxweynihii hore ee Galmudug, C/kariin Xuseen Guuleed, oo hadalkan ka sheegay Garoonka Kismaayo.
Diyaaradan jebisay awaamiirta dowladda ayaa waxay Jubbaland sheegtay in ay tahay mid ay iyadu soo iibsatay, isla-markaana ay ugu talagashay in ay soo daabusho wafuudda ka qaybgalaysa caleemo saarka Axmed Madoobe.
Diyaaradaha rakaabka ee isaga kala goosha Kismaayo iyo magaalooyinka kale ayaan iyagu jebhin karin amarka dowladda, iyagoo ka cararaya in dowladdu ganaax adag saarto.